China 3ply inogona kuraswa kumeso maski erudzi I, Type II, Type IIR vagadziri uye vanotengesa | ORIENT
3ply inogona kuraswa kumeso mask yerudzi I, Type II, Type IIR
Iyo inovharika mask yekuvhiya inoumbwa nematanho matatu eisina-yakarukwa yekunze dura, 98% yakanyungudika-yakaputirwa dura uye isina-yakarukwa yemukati nhete iyo ine yakapfava hypoallergenic pamusoro pechiso iyo inodzivirira ganda rekutsamwa kana matambudziko ekurwisa.
95% kana kusvika 99%
nzeve chiuno kana kusunga pa
chena, bhuruu, girini, pingi uye zvichingodaro
50pcs / bhokisi, 40boxes / ctn
mukati memazuva makumi matatu mushure mekuraira simbisa
jira risina kusukwa
Rokunze Dzinogara: 20GSM kana 25GSM / m2 (chena / bhuruu / girini / pingi / tsvuku / yero kana rumwe ruvara) Polypropylene Spun yakasungwa
Pakati firita ply: 20GSM / 25GSM / m2 (chena melt inopepereswa firita);
yemukati ply: 18GSM kana 20GSM / m2
1.Iyo inoraswa masiki yekuvhiya inogadzirwa nematanho matatu eisina-yakarukwa yekunze, 98% yakanyungudika-yakaputirwa uye isina-yakarukwa yemukati nhete iyo ine nyoro hypoallergenic pamusoro pevhu iyo inodzivirira ganda rekutsamwiswa kana matambudziko ekurwisa. Chigadzirwa chinoenderana EN14683 mhando II, mhando IIR standard.
2.No anogumbura uye nyore kufema kuburikidza, kunonunura zvakaisvonaka kufema kunyatsoshanda pamwe differential kufurirwa Yakakwirira yebhakitiriya filtration inoshanda.
Nyoro & Inonyaradza Nzeve Loop
3.Iyo nzeve-chiuno chinoitwa kubva kuLatex yemahara yakatenderedza Lycra elastic iyo inowedzerana neiyero ye1: 2 ichiita kuti zvive nyore kupfeka uye kubvisa nekunyaradza.
4.The nyore kufurirwa mhino waya zvakasununguka chinjika kukombama, zvinokodzera bhiriji remhino uye kumeso.
1.Iyo inoraswa masiki ekurapa ine muviri wemask, bhendi yebhande uye mhino clip. Iyo maski muviri unogadzirwa neisina-kurukwa machira uye yakanyungudutswa isina-yakarukwa machira, iyo yemhino clip inogadzirwa inokombama epurasitiki zvinhu, iyo mask bhandi mhando A inoumbwa nemhando yakasununguka, uye iyo mhando B inogadzirwa isina-yakarukwa machira;
2. Iyo bacterial filtration kunyatsoshanda haisi pasi pe 95%. Iko kufefetedza kwekudzivirira hakuna kupfuura 49Pa / cm2. Iyo huwandu hwakazara hwehutachiona makoloni iri≤100CFU / gE coli, Pseudomonas aeruginosa, Staphylococcus aureus, hemolytic streptococcus, uye fungi shzvese hazvionekwe.
Chitupa: CE ISO FDA, Ichena yakanyorwa muChina.
Pashure: Professional Medical Disposable Inodzivirira gown
Zvadaro: ORT103A Stethoscope